ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာကို TMS ကုထုံးနဲ့ အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြစို့.. - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 28, 2020 MSc. Jitrada Samajarn, M.D.
ဦးနှောက်ကို သံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့ နှိုးဆွပေးခြင်းကုထုံး (TMS) ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တတ်တဲ့ ဝေဒနာကို ကာကွယ်နိုင် / သက်သာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီ TMS ကုထုံးဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုများရဲ့ ၄၀% မှာ ဝေဒနာကို ၅၀% အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
TMS ကုထုံးဟာ စိတ်ချရပြီး နာကျင်မှု မရှိတဲ့အတွက် မေ့ဆေးလည်း သုံးစရာမလိုပါဘူး။
နာတာရှည်ခေါင်းကိုက်တာ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာ နဲ့ လေဖြတ်တာ စတဲ့ ရောဂါတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေ၊ မှတ်ဉာဏ်လျော့ပါးတာတွေ၊ အိပ်ရာထဲလဲနေတဲ့ နာမကျန်းမှုတွေ စတဲ့ မိမိရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေတတ်တဲ့ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် မူမမှန်မှုတွေကို ခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေအတွက် များသောအားဖြင့် ဒီကုသမှုကို ဆေးတိုက်ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုများပေးခြင်း စတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပေးပါတယ်။ ဆေးကုသမှုနယ်ပယ်ရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေက ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ကုသခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင် ခြင်းတို့အတွက် သံလိုက်စက်ကွင်းကိုအသုံးပြုပြီး နှိုးဆွပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီကုထုံးဟာ စိတ်ချရပြီး နာကျင်မှုကင်းတာကြောင့်လူနာကို မေ့ဆေးပေးဖို့မလိုအပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်ကုသမှုဟာ မိနစ် ၃၀-၆၀လောက်ပဲ ကြာပြီး လူနာတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေ ရရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Transcranial magnetic stimulation သံလိုက်လှိုင်းတွေအသုံးပြုပြီးနှိုးဆွတဲ့ကုထုံး (TMS) ဆိုတာ (MRI မှာ သုံးတဲ့ သံလိုက်လှိုင်းနဲ့ အတူတူပါပဲ) ကွိုင်ထဲကစွမ်းအင်တွေကို ဦးခွံကနေတစ်ဆင့် ဦးနှောက်ထဲကို ပို့ပေးပြီး ဦးနှောက်ဆဲလ်များအကြား ဆက်သွယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ အာရုံကြောစနစ်ဆဲလ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အလားအလာတွေကို တိုးတက်လာအောင် လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ လှိုင်းတွေရဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ ပြင်းအားအပေါ်မူတည်ပြီး ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို လိုအပ်သလို လှုံ့ဆော် / နှိပ်နယ် ပေးရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Transcranial stimulation ကို ပုံစံ ၂ မျိုး ခွဲထားပါတယ်။
Transcranial direct current stimulation (tDCS) ဦးနှောက်ကို တစ်နေရာထဲ အသေးစိတ်မဟုတ်ဘဲ အစိတ်အပိုင်းကျယ်ကျယ်ကို ခြုံပြီး ကုသတဲ့နည်း။
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) tDCS ထက် ပိုအသေးစိတ်ကာ တစ်နေရာထဲကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အဲဒီအစိတ်အပိုင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တိုးတက်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့နည်း။
သံလိုက်လှိုင်းကုထုံးက ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးပြုတာလဲ။
ဒီကုသမှုမှာ ဦးနှောက်ထဲကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေသွင်းပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်ဟာ သူလိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို သံလိုက်လှိုင်းပုံစံတွေအဖြစ်နဲ့ လက်ခံရရှိပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေဟာ ပြောင်းလဲသွားပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
ဦးနှောက်ထဲက neurotransmitters တွေဖြစ်တဲ့ catecholamine တို dopamine တို့ စတာတွေ ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် neuron ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လိုအပ်သလို မြှင့်တင်/လျှော့ချ ပေးတာ နဲ့ synaptic plasticity ကို ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအပိုင်းက သွေးသွားလာမှုကို မြှင့်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် လှုံ့ဆော်မှုရရှိတဲ့ဧရိယာတစ်ဝိုက်က သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အားကောင်းလာစေပါတယ်။
Brain-derived neurtrophic factor(BDNF) ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်း နာဗ်ကြောမျှင်တွေ ကြီးထွားစေဖို့ကို အားပေးပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ မတူဘူးပေါ့။
TMS ကုထုံးဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တိုးတက်စေတာသာမက ဦးနှောက်ပြင်ပ အရံအာရုံကြောစနစ် မှာပါဝင်တဲ့ ကျောရိုးမကြီး၊ အာရုံကြော နဲ့ ကြွက်သားတွေ စတဲ့အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်း တိုးမြင့်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သံလိုက်ကုထုံးနဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြောင်းလဲမှုတွေဟာလည်း နှိုးဆွခံရပြီးတဲ့နောက် ရေရှည်အတွက် အကြာကြီး ခံနိုင်ပါတယ်။
TMS ကုထုံးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
Transcranial magnetic stimulation treatment (TMS ကုထုံး) ဆိုတာ အောက်ပါ ဝေဒနာများကို ကုသရာမှာ ထိရောက်မှု ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် U.S. FDA က အသိအမှတ်ပြု ခွင့်ပြုပေး ထားတဲ့ စံပြုကုထုံးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါ – (ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုများရဲ့ ၄၀% မှာ ဝေဒနာကို ၅၀% အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။)
လေဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (တစ်ကိုယ်လုံးလှုပ်ရှားမှုများ၊ စကားပြောဆိုမှု၊ မျိုချနိုင်မှု၊ လက်လှုပ်ရှားမှု စတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ၃၀% လောက်အထိ ထိရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။)
ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖောက်ပြန်လို့ ကြွက်သားများတောင့်တင်းလာမှုကို လျှော့ချခြင်း။
နာတာရှည် နာကျင်နေမှုကို လျှော့ချခြင်း။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာကို သက်သာစေခြင်း နဲ့ ပျောက်ကင်းစေခြင်း။
အတက်ကျဆေးများ မတိုးတော့တဲ့ တက်ခြင်းကို ရပ်တန့်အောင်လုပ်ခြင်း။
ဦးနှောက်ခွဲစိတ်မှုမလုပ်ခင် ခွဲရမယ့်နေရာအတိအကျကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ရှာဖွေခြင်း။
ကိုမာ ဝင်နေတဲ့ လူနာရဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်စေခြင်း။
မမှတ်မိတော့ခြင်း၊ မေ့လျော့ခြင်းနဲ့ မှတ်ဉာဏ်လျော့ပါးခြင်းခံစားနေရတဲ့လူနာများရဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ငန်းများကို နှိုးဆွပေးခြင်း။
TMS ရဲ့ ဘေးကင်းမှုအကျိုးကျေးဇူးများ
မှန်မှန်လာနိုင်တယ်ဆိုရင် ပြင်ပလူနာအနေနဲ့တောင် ကုသပေးလို့ရခြင်း။
မိနစ် ၃၀ – ၆၀ အတွင်း ပြီးနိုင်ခြင်း။
ရေဒီယိုသတ္တိကြွလှိုင်းများမဟုတ်ဘဲ သံလိုက်လှိုင်းများသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေရှည် / ယာယီ ထိရောက်မှုများ ရှိခြင်း။
ကုသမှုမှ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
သံလိုက်လှိုင်းတွေနဲ့ နှိုးဆွပေးတာ ဖြစ်လို့ မျက်နှာပေါ်က ကြွက်သားတွေ တင်းတာ တောင့်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မူးဝေခြင်းနဲ့ နားထဲမှာ မြည်သံအကျယ်ကြီး ကြားနေရတတ်ခြင်း။
တက်ခြင်း (အလွန်ဖြစ်ခဲပါတယ်။ လူနာတွေရဲ့ ၀.၁% အောက်မှာပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။)
သံလိုက်လှိုင်းတွေပို့လွှတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို နှိုးဆွပေးတဲ့ ဒီ TMS ကုထုံးအသစ် ဟာဆိုရင် ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကြီး ထိခိုက်ဖောက်ပြန်မှုကို ကုသပေးဖိုးအတွက် အလွန်ပဲ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကုသမှုဟာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ အပိုင်းလိုက် အပိုင်းလိုက် ခွဲပြီးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တွေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြားကုထုံးတွေဖြစ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာရောဂါအလိုက် ဆေးပေးခြင်း၊ physiotherapy ကုထုံးတွေဖြစ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ နှိပ်နယ်ပေးခြင်း စတာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ကုသပေးရင် ပိုပြီးတော့ ထိရောက်တိုးတက်မှု ရှိလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာကို TMS ကုထုံးနဲ့ အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြစို့.. နာတာရှည်ခေါင်းကိုက်တာ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာ နဲ့ လေဖြတ်တာ စတဲ့ ရောဂါတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေ၊ မှတ်ဉာဏ်လျော့ပါးတာတွေ၊ အိပ်ရာထဲလဲနေတဲ့ နာမကျန်းမှုတွေ စတဲ့ မိမိရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေတတ်တဲ့ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် မူမမှန်မှုတွေကို ခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေအတွက် များသောအားဖြင့်